Home Wararka Qaadka Miirowga ee Kenya ayaa la Filayaa in dib loo Furo Marka...
Qaadka Miirowga ee Kenya ayaa la Filayaa in dib loo Furo Marka la Waafajiyo Siyaasada Somaliya.
Warar aan la hubin ayaa sheegaya in dib loo furayo qaadka ka iman jiray dalka Kenya ee Miirowga la yiraahdo, kaas oo ay dowladdi Farmajo joojisay si ay qandaraaska uga jarto kooxo ka soo jeeday beelo aysan iyadu heshiis la ahayn, uguna naas nuujiso dad ay iyadu rabtay.
Runtii Somaliya qaad lagama joojin ee waxaa guud laga wareejiyey dalkii uu ka iman jiray taas oo ahayd raad tirasho si dad la rabay in la cunaqabateeyo, kuwakalana la naas nuujiyo loo siiyo, waxaana qaadka loo furay inay Itoobiya ka keenaan reerka Madaxdweyne Farmajo oo waxaa qandaraaskii uu Farmajo gacantiisa ugu saxeexay walaalkiis Xasan Farmajo oo ilaa maanta ka keena Dalka Itoobiya.
Waxaa shacbiga lagu marin habaabinayey 5tii sanao ee tagtay in Kenya ay Caddow tahay Itoobiyna Xabiib tahay , sida in Imaaraadka uu Codow yahay Qatarna ay Xabiib tahay.
Runtii dadka qaar ayaa is weydiiya Farmajo geesisanaa marka barqo cad uu walaalkiis u saxeexay inuu qaadka qandaraaskiisa siisto, isagoo dad horay u haystay uga qaaday suuqana u xeray walaalkiis, laakiin maaha geesinimmo ee waa daciifnimo xataa meel soke ah. Ugu yaraan waxay ahayd in la furo suuqa oo lala tartamo.
Haddaba dowladda MW Xasan Sh Maxamuud iyo RW Xamza waxaa laga rabaa:
In haddii qaadka loo furayo dalka Kenya wax looga badasho oo aan la iska furin.
In aan suuqa loo xerin cid gaar ah oo Somalida ku tartanto.
Inaan Xasan Cabdullahi Farmajo looga qaadin Qandaraaska inuu la dhasahy Farmajo ee uu ku noolaado xaqiisa Somalinimo ee uu u leeyahay inuu helo qandaraas dembigana ay leedahay ciddii sida aan habraac sax u marsiisay. Sababtoo ah waxaa abuurmay reero iyo masaakiin ka ganacsata oo haddii hadda la joojiyaa hal mar ku waayaya nolol maalmeed ka soo gala qaadka hadda Itobiya laga keeno.
Dowladda Cusub ayaa laga rabaa inay aragti ka yeelato mukhaadaraadka faraha badan ee dalka ku baahaya, waxaana la sheegay in markii qaadka la joojiyey in dalka ay aad ugu soo bateen mukhaaraad ka halis badan sida Khamriga iyo Daroogada.
Magaalooyinka waa weyn ee dalka oo dhan waxaa ka furan goobo la caweeyo oo lagu iibiyo si furan khamriga iyo Daroogada waa in ay dowladdu wax ka qabataa.
Daroogada iyo Khamriga waxay qaadka uga duwan yihiin:
Qaadka waxaa cuna inta badan dad waaweyn oo muddo dheer fadhiya, lana og yahay.
Khamriga iyo Daroogada waxaa aad u isticmaala dhallinyarada oo hadda ku baaba’ay 5 tii sano ee tagtay.
Qaadka waxaa uu ka soo dagaa gooramada Caalamiga ah ee dalka iyo furdooyinka, waxaana laga qaadaa canshuur taas oo xataa ah hannaan lagu xakameyn karo haddii loo baahdo, hasa yeeshee Khamriga iyo Daroogada waxaa dalka lagu soo geliyaa tuugannimo waxayna soo maraa meelo aan la ogeyn sida doomo keena, xuddudaha dayacan ee Kenya iyo Itoobiya oo ay qarsoodi nooga soo galaan.
Sidaas darted waa inay dowladdan cusub ka yeelataa siyaasad cad oo lagu wajahayo, waxna looga qabanayo, si dhallinyarada looga badbaadiyo inay dabar go’aan mustaqbalka dow.
Previous articleMW Xasan oo Booqasho rasmi ah ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta
Next articleSheikh Shakhbout bin Nahyan receives Somalia’s president at Abu Dhabi airport
Loolan cusub oo ka dhex bilowday Kheyre & Farmajo lana kala...
Dab ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaal Dhuusamareeb